Brazila - Howling Pixel
Ny Brazila (Brasil amin'ny teny portogey), na Repoblika federalin'i Brazila, dia firenena ngeza indrindra ary mivelatra indrindra an' Amerika latina. Miaraka amin'ny velarantany 8 547 400 km² sy miaraka amin'ny isam-ponina miisa mahery ny 190 tapitrisa mponina, io ny firenena faha dimy amin'ny lafin'ny velarantany sy amin'ny lafin'ny isam-ponina. Amin'ny 2008, ny Brazila dia hery ara-piharian-karena faha 11 miaraka amin'ny PIB 1 572 839 Md USD, eo aorian' Espaina na 2,42%-n'ny PIB-n'ny tontolo. Maka ny antsasan'ny velaran' Amerika Atsimo izy ary mizara sisin-tany amin'ny firenena rehetra ao Amerika Atsimo afats'i Silia sy ny Ekoatera.
Ny Brazila dia zanatany portogey voalohnay mandritry ny taonjato maro, ankehitriny, io irery no lovan'ny Portogaly any amerika, amin'ny fisehon'ny kolontsaina sy ny teny ofisialy, ny teny portogey.
Firenena katôlika sy miteny portogey ngeza indrindra, mpikamban'ny CPLP izy. Ny fiteny portogey dia teny voalohany any Amerika Atsimo noho ny demôgrafia brazilianina.
República Federativa do Brasil ((pt))
Repoblika federalin'i Brazila ((mg))
Teny filamatra : Ordem e Progresso
Malagasy : « Fandriam-pahalemana sy Fandrosoana »
Teny ofisialy fiteny Portogesy
Tanàna ngeza ondrindra São Paulo, Rio de Janeiro
- filoha Repoblika federaly
- Rano (%) faha 5
8 547 877(IBGE) km²
- hakitroka faha 5
191 043 661 mpo.
Anaran'ny mponina Brazilianina
IDH (2007) ▲ 0,807 (ambony) faha 70
Sandam-bola Real (BRL)
Faritr'ora UTC -2 hatramin'i -4
Hiram-pirenena Hino Nacional Brasileiro
Ny faritra Afovoany Andrefana
((pt))((es))((en)) Portal-n'ny governemanta brazilianina
((fr)) Ambasadin'ny Brazila any Paris
((pt)) Comunidade França-Brasil
((es))((en))Centro Argentino de Estudios Internacionales, e-books
Alagoas dia faritany mizaka tena brazilianina eo amin'ny faritr'i Nordeste. Maceió no renivohiny.
Arjentina (anarana ofisialy : República Argentina amin'ny teny espaniola, dikaina ho Repoblika Arjentina amin'ny teny malagasy) dia firenena iray izay mivelatra eo a min'ny faritra atsinanan'ny tanjona atsimon'i Amerika Atsimo. Ny renivohiny dia Buenos Aires ary ny firenena manodidina azy dia Silia, Bolivia, Paragoay, Brazila ary Orogoay. Ny velarantaniny dia 2,76 tapitrisa kilometatra toradroa ary ny isam-poniny dia eo amin'ny 40,6 tapitrisa mponina.
Ny teny ofisialin'i Arjentina dia ny fiteny espaniola.
I Bahia dia faritany mizaka-tena ao Brazila. Ny renivohiny diaSalvador. Ny velarantanin'ilay faritany dia 567 295,669 kilometatra toradroa ary ny isam-poniny dia 14 637 364.
I Ceará dia faritany mizaka-tena ao Brazila. Ny renivohiny dia Fortaleza. Ny velarantanin'ilay faritany dia 148 825,602 kilometatra toradroa ary ny isam-poniny dia 8 448 055.
22.837500°S 51.973060°W﻿ / -22.837500; -51.973060
Colorado dia tanàna ao amin'ny faritany mizaka tenan'i Paraná ao amin'ny Brazila.
Ny fiteny espaniola, na koa fiteny kastilianina, dia fiteny iray ao Eoropa. Io fiteny io dia fiteny amin’ny vondrona rômana ny fiteny indô-eoropeanina. Miaraka amin’ny fiteny frantsay, italianina ary portogey, io fiteny io no anisan’ny fiteny zanaky ny fiteny latina, fiteny taloha nampiasaina maneraka an’i Eoropa ary Azia Andrefana ho an’ny fifandraisana.
Ny fiteny espaniola dia fiteny avy amin’ny fiteny latina, ary niavaka tamin’ilay fiteny latina ny fiteny espaniola taloha nanomboka tamin’ny taonjato faha sivy, noho ny havitsian’ny fifandraisana tamin’ny taona afovoany. Ao amin’ny faritra afovoan’i Espaina no niavian’ny fiteny kastilianina ankehitriny. Ary tsy io irery no fiteny notenenina ao amin’ny tanjona iberina nanomboka tamin’ny fisarahany tamin’ny fiteny latina hatramin’izao fotoana izao : ao ny fiteny portogey, izay tenenina any Pôrtogaly ary any Brazila, ao ny fiteny Katalana, izay tenenina any Katalonia, manan-drenivohitra Barselona, ao ny fiteny Eoskarata izay tenenina any amin’ny farany andrefan’ny Pyrénées, ao koa ny fiteny galisiana izay anisan’ny fiteny niavian’ny fiteny portogey any Galisia.
Ankehitriny ny fiteny espaniola dia anisan’ny teny ofisialin’ny Firenena Mikambana miaraka amin’ny fiteny frantsay, anglisy, sinoa ary rosy. Any ivelan’i Espaina, io no teny ofisialin’ireo firenena ao Amerika Afovoany ary amin’ny faritra andrefan’i Amerika Atsimo. Ny isa manontolon’ny mpiteny espaniola manerana izao tontolo izao, raha isaina ireo olona mianatra azy fa tsy nibe tamin’ny ilay fiteny dia eo amin’ny eninjato (600) tapitrisa eo ho eo no isan’ireo olona mahazo azy na miteny azy.
15.934440°S 50.140280°W﻿ / -15.934440; -50.140280
I Goiás dia faritany mizaka-tena ao Brazila, izay eo amin'ny faritra afovoan'ny firenena. Ny teny Goiás (izay Goyaz taloha) dia avy amin'ny anaran'ny mponina teratany eo an-toerana. Ny teny tena niavian'ilay anarana dia mety guaiá izay midika "olona mitovy fiaviana". Ny faritany manodidina azy dia i Tocantins, Bahia, Minas Gerais, ny Distrika Federaly, Mato Grosso do Sul ary Mato Grosso.
Ny renivohitr'i Goiás dia Goiânia, izay nanana isam-ponina 1,26 tapitrisa tamin'ny 2008.
I Maranhão dia faritany mizaka-tena ao Brazila. Ny renivohiny dia São Luís. Ny velarantanin'ilay faritany dia 331 935,507 kilometatra toradroa ary ny isam-poniny dia 6 569 683.
I Mato Grosso dia faritany mizaka-tena ao Brazila. Ny renivohiny dia Cuiabá. Ny velarantanin'ilay faritany dia 903 357,908 kilometatra toradroa ary ny isam-poniny dia 3 033 991.
I Minas Gerais dia faritany mizaka-tena ao Brazila. Ny renivohiny dia Belo Horizonte. Ny velarantanin'ilay faritany dia 586 528,293 kilometatra toradroa ary ny isam-poniny dia 19 595 309.
I Paraíba dia faritany mizaka-tena ao Brazila. Ny renivohiny dia João Pessoa. Ny velarantanin'ilay faritany dia 56 439,838 kilometatra toradroa ary ny isam-poniny dia 3 766 834.
I Pará dia faritany mizaka-tena ao Brazila. Ny renivohiny dia Belém. Ny velarantanin'ilay faritany dia 1,247,689,515 kilometatra toradroa ary ny isam-poniny dia 7,588,078.
I Pernambuco dia faritany mizaka-tena ao Brazila. Ny renivohiny dia Recife. Ny velarantanin'ilay faritany dia 98 311,616 kilometatra toradroa ary ny isam-poniny dia 8 796 032.
I Piauí dia faritany mizaka-tena ao Brazila. Ny renivohiny dia Teresina. Ny velarantanin'ilay faritany dia 251 529,186 kilometatra toradroa ary ny isam-poniny dia 3 119 015.
I Rio Grande do Sul dia faritany mizaka-tena ao Brazila. Ny renivohiny dia Porto Alegre. Ny velarantanin'ilay faritany dia 81 748,538 kilometatra toradroa ary ny isam-poniny dia 10 693 929.
22.906420°S 43.182230°W﻿ / -22.906420; -43.182230
I Rio de Janeiro dia faritany mizaka-tena ao Brazila. Ny renivohiny dia Rio de Janeiro. Ny velarantanin'ilay faritany dia 43 696,054 kilometatra toradroa ary ny isam-poniny dia 15 993 583.
I Santa Catarina dia faritany mizaka-tena ao Brazila. Ny renivohiny dia Florianópolis. Ny velarantanin'ilay faritany dia 5 346,181 kilometatra toradroa ary ny isam-poniny dia 6 248 436.
I Sergipe dia faritany mizaka-tena ao Brazila. Ny renivohiny dia Aracaju. Ny velarantanin'ilay faritany dia 21 910,348 kilometatra toradroa ary ny isam-poniny dia 2 068 031.
23.547500°S 46.636110°W﻿ / -23.547500; -46.636110
São Paulo (izay tononina hoe /sɐ̃w̃ 'paw.lu/ araka ny abidy ara-drafipeo iraisam-pirenena) (Masindahy Paoly amin'ny teny malagasy) dia tanàna ngeza indrindra any Brazila, any atsimo atsinanany. Izy no renivohi-paritan'ny faritany mizaka-tenan'i São Paulo ary anivo ara-bola, ara-barotra ary ara-indostria any Amerika Latina.